बिहान खाली पेटमा पानी पिउदाँ हुने आश्चार्यजनक ८ फाइदा – Ekathmandunepal
Homeकथाबिहान खाली पेटमा पानी पिउदाँ हुने आश्चार्यजनक ८ फाइदा
बिहान खाली पेटमा पानी पिउदाँ हुने आश्चार्यजनक ८ फाइदा
७ पुष २०७४, शुक्रबार १७:१२ ekathmandu Nepal कथा 0
एजेन्सी । अधिकांश रोग पेटमा नै उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले खाली पेटमा पानी खानुको अर्थ धेरै छ। यसको प्रमुख फाइदा पेट स्वस्थ बनाउनु हो। खाली पेट पानी खादा स्वास्थ्यमा फाइदा हुने तथ्य सर्वप्रथम जापानमा प्रमाणित भएको हो। प्राय जापानीले बिहान उठ्नेवित्तिकै चार गिलास पानी खान्छन्। पानी खाएको आधा घन्टापछि मात्र ब्रेकफास्ट लिन्छन्।
यो वाटर थेरापीले उनीहरुलाई सक्रीय र स्वस्थ रहन मद्दत गरिरहेको छ। खाली पेट पानी खाँदा करिब ९० प्रतिशत रोगबाट बच्न सकिन्छ। यसमा पनि मनतातो पानी उपर्युक्त हुन्छ।
नियमित खाना खानु महत्वपूर्ण हुन्छ । तर भोक लागेन भने के गर्नेरु खाली पेट पानी पिउदा तपाईको भोग जाग्छ। बिहान उठ्ने वित्तिकै खाली पेटमा दुई गिलास पानी पिउनुहोस तपाईलाई भोक लागिरहन्छ।
मानिसलाई बारम्बार टाउको दुख्नुको मुख्य कारण प्रर्याप्त पानी नपिउनु हो । डिहाइड्रेसनको मुख्य लक्षण नै टाउको दुख्नु हो । तसर्थ बिहान उठ्नेवित्तिकै पानी खानु भयो भने यो समस्याबाट मुक्ती मिल्छ । टाउको दुख्नबाट बचाउनको अतिरिक्त यसले श्वासको दुर्गन्ध र अन्य व्याक्टेरियाको संक्रमणबाट जोगाउछ।
पानी पिउदा कोलोन सफा गरिदिन्छ । एक गिलास पानी खाली पेट खाँदा कोलोनमा जम्मा भएको लेदो र विकार सफा गरिदिन्छ। कोलोन सफा भएमा शरिरलाई आवश्यक पोषक तत्व शोषण गर्न सहयोग पुयाउछ । तपाईको कोलोन सफा भएमा समग्रमा सम्पूर्ण शरिर नै स्वस्थ हुन्छ।
अमेरिकन टीभी शो ‘क्वांटिको सीजन-३’ का लागि बलिउड नायिका प्रियङ्काको फोटोशुट (भिडियो)
हरेक छ महिनामा ‘होलबडी’ चेकअप गर्नुपर्छ भनिन्छ । के-के जाँच गरिन्छ? कुन अस्पतालमा कति शुल्क लाग्छ ? जान्नुहोस
बुढाको भन्दा त तपाईंको ठुलो रहेछ (770)
मैले मेरो २० बर्से दिदी सँग यसरी रात बिताएको थिए… (586)
खुट्टा फर्किने भनेको के हो ? किन फर्किन्छ खुट्टा ? (295)
सानिमालाई सेक्सको प्रस्ताव राख्दा… (293)
फिल्ममा आउँनु अघि यस्ता थिए नेपाली चलचित्रका चर्चित… (185)
म बाहिर हेर्दा खुसि छु तर मिठो सेक्स कहिले भएन- के… (172)
सेक्स पावर” तुरुन्तै अत्यधिक मात्रामा बढाउने घरेलु औषधी (168)